यस्तो छ नेपाल टेलिकमको होली विशेष अफर
शुक्रबार, २७ फागुन, २०७३
काठमाडौं, फागुन २७ । नेपाल टेलिकमले होली पर्वका अवसरमा आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई बिभिन्न किसिमका सेवाहरुमा सहुलियत पूर्ण अफर उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कम्पनीको होली विशेष अफर अन्तर्गत जिएसएम/सिडिएमए पोष्टपेड तथा प्रिपेडका सेवाग्राहीलाई रिचार्ज कार्डमा डाटा बोनस, यूट्युब् डेटा प्याक र एसएमएस प्याक रहेका छन् ।
रिचार्ज कार्डमा डाटा बोनस
रिचार्ज कार्डमा डाटा बोनस अन्तर्गत रु. २०० को रिचार्ज कार्डमा २०० एमबी डाटा, रु. ५०० को रिचार्ज कार्डमा ५०० एमबी डाटा र रु. १००० को रिचार्ज कार्डमा १००० एमबी डाटा दुई दिनसम्म बोनस अवधि रहने गरी राती १०ः०० बजे देखी बिहान ६ः०० बजेसम्म उपभोग गर्न पाइनेछ ।
यो अफरको अवधि २०७३ फागुन २९ गतेदेखि २०७३ चैत्र ०३ गतेसम्म ५ दिन जिएसएम/सिडिएमए का प्रिपेडका ग्राहकलाई उपलब्ध हुनेछ । यो अफर अन्तर्गतको डाटा बोनस रिचार्ज गरेपश्चात् स्वतः प्राप्त हुनेछ ।
युट्युब् डाटा प्याक
त्यसैगरी युट्युब् डाटा प्याक अन्तर्गत १ जिबी युट्युब् डाटा प्याक १०० रुपैयाँमा २ दिनसम्म र ५०० एमबी युट्युब् डाटा प्याक ६० रुपैयाँमा १ दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने छ । यो अफरको अवधि २०७३ फागुन २९ गतेदेखि २०७३ चैत्र १३ गतेसम्म १५ दिन जिएसएमका प्रिपेड र पोष्टपेड ग्राहकलाई उपलब्ध हुनेछ ।यो अफर लिनका लागि U1GB या U500MB टाइप गरी १४१५ मा SMS गर्नुपर्ने छ ।
एसएमएस प्याक अन्तर्गत १०० वटा एसएमएस १० रुपैयाँमा (नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र मात्र) ३ दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने छ । यो अफरको अवधि २०७३ फागुन २९ गतेदेखि २०७३ चैत्र ०१ गतेसम्म ३ दिन जिएसएम/सिडिएमए का ग्राहकलाई उपलब्ध हुनेछ । यो सेवा लिनका लागि SMS100 टाइप गरी १४१५ मा SMS गर्नुपर्नेछ ।